Tababare Solskjær oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Fulham, Muxuuse ka yiri Paul Pogba? – Gool FM
Tababare Solskjær oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Fulham, Muxuuse ka yiri Paul Pogba?
Dajiye February 9, 2019
(Manchester) 09 Feb 2019. Macalinka reer Norway Ole Gunnar Solskjær ayaa amaanay kooxdiisa Manchester United, kadib markii ay 3-0 kaga badiyeen Fulham kulankooda 26-aad horyaalka Premier League.
Tababa Solskjær ayaa wuxuu ugu horeyn hadalkiisa ku bilaabay amaanta xidigiis khadka dhexe ee Paul Pogba wuxuun yiri:
“Waa ciyaaryahan ku ciyaaraya awood gaar ah”.
“Waxaan isku dayi doonaa inaan ka ciyaarsiino xarumo uu kooxaha naga soo hor jeedo kaga abuuri karo dhibaato”.
“Paul Pogba wuxuu awoodaa inuu sidaas sameeyo, waxaan ula hadlaa isaga sida ciyaartoyda oo dhan, taas ayaana ah shaqada maamulka”.
“Mar walba waxaa jira halis, laakiin hadii aadan halis galin, ma jirto kulamo aad guuleysaneyso, waa inaan ku kalsoonaadaa ciyaartoyda, ma jirto wax dhibaato ah eeaan ku qabo si aan u ciyaarsiiyo mid kastoo iyaga ka mid ah”.
“Waqti badan ayaan taageere u ahaa kooxda Manchester United, mar walbana waxaan kalsooni ku qabaa iney guuleysan doonto, taasoo sidoo kale ah maskaxda ay xambaarsan yihiin ciyaartoyda, sidaasi darteed waan ku faraxsanahay”
Casemiro oo gashtay Kabihii Cristiano Ronaldo bal daawo gool cajiib ah oo uu caawa ka dhaliyey kooxda Atletico Madrid
Haddii aad ogeed Neymar iminkana laacib kale oo weyn ayaa ka dhaawacmay kooxda PSG ka hor kulanka Man United